31 Kwapera nguva yakati, akanzwa mashoko evanakomana vaRabhani, vachiti: “Jakobho atora zvose zvaiva zvababa vedu; aunganidza upfumi hwose uhwu huchibva pane zvaiva zvababa vedu.”+ 2 Jakobho paaitarira chiso chaRabhani, chakanga chisina kuita sezvachaimbova kwaari.+ 3 Jehovha akazoti kuna Jakobho: “Dzokera kunyika yemadzibaba ako nokuhama dzako,+ uye ndicharamba ndinewe.”+ 4 Jakobho akabva atumira shoko, akashevedza Rakeri naReya kusango kuboka rake, 5 akati kwavari: “Ndiri kuona chiso chababa venyu, kuti havasi sezvavaichimbova kwandiri;+ asi Mwari wababa vangu ave aneni.+ 6 Imi munoziva kuti ndakashandira baba venyu nesimba rangu rose.+ 7 Baba venyu vakandinyengedza, vakachinja mubayiro wangu kagumi, asi Mwari haana kuvabvumira kuti vandikuvadze.+ 8 Kana vaiti, ‘Zvine makamba makamba zvichava mubayiro wako,’ boka rose rezvipfuwo raibva rabereka zvine makamba-makamba; asi kana vaiti, ‘Zvine mitsetse zvichava mubayiro wako,’ boka rose rezvipfuwo raibva rabereka zvine mitsetse.+ 9 Naizvozvo Mwari akaramba achitora boka rezvipfuwo rababa venyu achindipa.+ 10 Boka rezvipfuwo parakazonzwa kuda mukono ndakatarira ndichirota,+ ndikaona nhongo dzakanga dzine mitsetse nedzakanga dzine makamba makamba nedzakanga dzine mavara,+ dzichikwira boka rezvipfuwo. 11 Ngirozi yaMwari wechokwadi yakabva yati kwandiri ndichirota, ‘Jakobho!’ ndikabva ndati, ‘Ndiri pano.’+ 12 Iyo ikati, ‘Ndapota, tarira, uone kuti nhongo dzose dziri kukwira boka rezvipfuwo dzine mitsetse, dzine makamba makamba uye dzine mavara, nokuti ndaona zvose zvauri kuitirwa naRabhani.+ 13 Ndini Mwari wechokwadi wokuBheteri,+ pawakazodza shongwe+ uye pawakapika mhiko kwandiri.+ Zvino simuka, buda munyika ino udzokere kunyika yawakaberekerwa.’”+ 14 Rakeri naReya vakamupindura kuti: “Tichiine mugove wenhaka mumba mababa vedu here?+ 15 Chokwadi havationi here sevokune imwe nyika zvavakatitengesa, zvokuti vanongoramba vachidya mari yavakapiwa nokuda kwedu?+ 16 Nokuti pfuma yose yakatorwa naMwari kuna baba vedu ndeyedu neyevana vedu.+ Naizvozvo ita zvose zvawaudzwa naMwari.”+ 17 Jakobho akabva asimuka akakwidza vana vake nemadzimai ake pangamera;+ 18 akatanga kutinha boka rake rose rezvipfuwo nezvinhu zvake zvose zvaakanga aunganidza,+ boka rezvipfuwo raakanga awana raakanga aunganidza muPadhani-aramu, kuti aende kuna Isaka baba vake kunyika yeKenani.+ 19 Zvino Rabhani akanga aenda kunoveura makwai ake. Munguva iyi Rakeri akaba terafimu+ dzababa vake. 20 Naizvozvo Jakobho akanyengedza Rabhani muSiriya, nokuti akanga asina kumuudza kuti akanga achitiza. 21 Akatiza, akasimuka, akayambuka Rwizi,+ iye nezvose zvaaiva nazvo. Pashure paizvozvo akananga kunzvimbo ine makomo yeGiriyedhi.+ 22 Gare gare, pazuva rechitatu, Rabhani akaudzwa kuti Jakobho akanga atiza. 23 Naizvozvo akatora hama dzake dzaaiva nadzo, vakamutevera+ kwechinhambwe chorwendo rwemazuva manomwe vakamubata ari munzvimbo ine makomo yeGiriyedhi. 24 Mwari akabva auya kuna Rabhani muSiriya+ achirota usiku+ akati kwaari: “Chenjerera kuti usataura zvakanaka kana zvakaipa naJakobho.”+ 25 Naizvozvo Rabhani akasvika kuna Jakobho, Jakobho zvaakanga adzika tende rake mugomo racho uye Rabhani akanga aita kuti hama dzake dzidzike musasa munzvimbo ine makomo yeGiriyedhi. 26 Rabhani akabva ati kuna Jakobho: “Waitei, zvawandinyengedza, zvawaenda nevanasikana vangu senhapwa dzakatorwa pachishandiswa bakatwa?+ 27 Nei waita zvokutiza pachivande ukandinyengedza, ukasandiudza, zvokuti ndingadai ndakurega uchienda nokufara uye nenziyo,+ negandira norudimbwa?+ 28 Hauna kundipa mukana wokutsvoda vana vangu nevanasikana vangu.+ Zvino waita zvoupenzi. 29 Ruoko rwangu rune simba rokukukuvadzai,+ asi Mwari wababa venyu akataura neni usiku hwapfuura, achiti, ‘Chenjerera kuti usataura zvakanaka kana zvakaipa naJakobho.’+ 30 Zvawaenda zvino nokuti wave uchisuwa kwazvo imba yababa vako, saka wabirei vanamwari vangu?”+ 31 Jakobho akapindura Rabhani kuti: “Nokuti ndakanga ndichitya.+ Ndakati, ‘Mungandibvutira vanasikana venyu.’ 32 Ani naani wamunowana aine vanamwari venyu, ngaarege kurarama.+ Pamberi pehama dzedu, nyatsotsvakai pane zvandinazvo muvatore.”+ Asi Jakobho haana kuziva kuti Rakeri akanga avaba.+ 33 Naizvozvo Rabhani akapinda mutende raJakobho nomutende raReya nomutende revarandasikana vacho vaviri,+ asi haana kuvawana. Akazobuda mutende raReya akapinda mutende raRakeri. 34 Zvino Rakeri akanga atora terafimu dzacho, akadziisa muchigaro chomukadzi chepangamera chakaita setswanda, akaramba akadzigarira. Naizvozvo Rabhani akabata-bata mutende mose, asi haana kudziwana. 35 Akabva ati kuna baba vake: “Ishe wangu ngaasanditsvukisire maziso,+ nokuti handikwanisi kusimuka pamberi penyu, nokuti zvinogaroitika kuvakadzi zviri pandiri.”+ Naizvozvo akaramba achinyatsotsvaka, asi haana kuwana terafimu dzacho.+ 36 Zvino Jakobho akatsamwa,+ akatanga kupopotedzana naRabhani, Jakobho akapindura Rabhani kuti: “Kumukira kwangu kuri papi,+ chivi changu ndechipi, kuti chive chikonzero nei manditevera kudaro?+ 37 Zvino zvamabata-bata muzvinhu zvangu zvose, chii pazvinhu zvose zveimba yenyu chamawana?+ Chiisei apa pamberi pehama dzangu nehama dzenyu,+ uye ngavatonge pakati pedu tiri vaviri.+ 38 Ndave ndinemi makore makumi maviri aya. Makwai enyu makadzi nenhunzvi dzenyu dzembudzi hadzina kusvodza,+ handina kumbodya makondohwe eboka renyu rezvipfuwo. 39 Mhuka ipi neipi yakabvamburwa-bvamburwa handina kuuya nayo kwamuri.+ Ini ndairipira kushayikwa kwayo. Ingave yakabiwa masikati kana kuti yakabiwa usiku, maiireva paruoko rwangu.+ 40 Ndaigara ndichipiswa nezuva masikati, ndichitonhorwa nechando usiku, uye hope dzangu dzaitiza mumaziso angu.+ 41 Izvozvi zvinosvitsa makore makumi maviri ndiri mumba menyu. Ndakakushandirai makore gumi nemana nokuda kwevanasikana venyu vaviri, makore matanhatu nokuda kweboka renyu rezvipfuwo, asi makaramba muchichinja mubayiro wangu kagumi.+ 42 Kudai Mwari wababa vangu,+ Mwari waAbrahamu uye Aityiwa naIsaka,+ akanga asina kuva kurutivi rwangu, iko zvino mungadai mandirega ndichienda ndisina chinhu. Mwari akaona kutambudzika kwangu nokushanda zvakaoma kwemaoko angu, naizvozvo akakutsiurai usiku hwapfuura.”+ 43 Rabhani akabva apindura Jakobho kuti: “Vanasikana vacho vanasikana vangu, vana vacho vana vangu, boka racho rezvipfuwo iboka rangu rezvipfuwo, uye zvinhu zvose zvauri kutarira ndezvangu nezvevanasikana vangu. Chii chandingaita kwavari nhasi kana kuti kuvana vavo vavakabereka? 44 Zvino, chiuya, ngatiite sungano,+ ini newe, uye ichava chapupu pakati pangu newe.”+ 45 Naizvozvo Jakobho akatora dombo akarimisa kuti rive shongwe.+ 46 Jakobho akabva ati kuhama dzake: “Nhongai matombo!” Vakatora matombo vakaita murwi.+ Pashure paizvozvo akadyira ipapo pamurwi wacho. 47 Rabhani akautumidza kuti Jegari-sahadhuta, asi Jakobho akautumidza kuti Garidhi. 48 Rabhani akati: “Murwi uyu chapupu pakati pangu newe nhasi.” Ndokusaka akautumidza kuti Garidhi,+ 49 uye Nharire, nokuti akati: “Jehovha ngaarambe akarinda pakati pangu newe patinenge tisingaonani.+ 50 Kana ukatambudza vanasikana vangu+ uye kana ukatora mamwe madzimai mukuwedzera kuvanasikana vangu, hapana munhu ari kwatiri. Ona! Mwari ndiye chapupu pakati pangu newe.”+ 51 Rabhani akati kuna Jakobho: “Hoyu murwi uye heino shongwe yandamisa pakati pangu newe. 52 Murwi uyu chapupu, uye shongwe iyi chinhu chinopupurira,+ kuti handingadariki murwi uyu kuzokurwisa uye kuti haungadariki murwi uyu neshongwe iyi kuzondikuvadza.+ 53 Mwari waAbrahamu+ namwari waNahori+ ngaatonge pakati pedu, iye mwari wababa vavo.” Asi Jakobho akapika neAityiwa nababa vake Isaka.+ 54 Pashure paizvozvo Jakobho akabayira chibayiro mugomo racho akakoka hama dzake kuti dzidye zvokudya.+ Naizvozvo vakadya zvokudya vakarara mugomo racho. 55 Zvisinei, Rabhani akafumomuka akatsvoda+ vana vake nevanasikana vake akavakomborera.+ Rabhani akabva apinda munzira kuti adzokere kunzvimbo yake.+